Dhibaatada Jilicsanaanta: Cawaaqibka Masiibada ee Ereyga Keydinta
Jack Miller, oo ah Semt Maareeyaha Guusha ee Macaamilka, ayaa sheegaya in marka ay timaado qoraallada SEO-saaxiibtinimo, maaddooyinka muhiimka ah ee loo yaqaan 'keywords' inta badan waxaa loo tixgeliyaa qayb muhiim ah. Google, Bing, iyo Yahoo waxay jecelyihiin, waana inaadan ka dhaafin ereyada muhiimka ah ee ku jira mawduucaaga wixii kharash ah. Maalmihii ugu horeeyay ee SEO, maaddada muhiimka ah waxay ahayd wax loo isticmaalo in si fiican loo shaqeeyo oo loo caawiyo webmasters si ay u helaan darajo wanaagsan ee natiijooyinka raadinta . Maalmahan, isbeddelka ayaa lagu bedelay guud ahaan, mana aad kari kari kartid darajadaada adoo isticmaalaya walxaha muhiimka ah - riverside county plumbing services. Ka sokow, Google ayaa ciqaabi doonta goobtaada oo ay mamnuuceyso noloshooda haddii aad soo dirto maqaallo caan ah oo muhiim ah.
Maxay qalad u tahay walxaha muhiimka ah?
Waa ammaan in la yiraahdo walxaha muhiimka ah ee loo isticmaalo in ay noqdaan farsamada casriga ah ee SEO, laakiin hadda waxaa si cad loo tixgeliyaa istaraatiijiga madow SEO SEO. Matt Cutts oo ka socda Google ayaa sheegay in shirkadu ay isku dayeyso sida ugu wanaagsan si ay u kala soocaan maqaallada tayada sare leh iyo waxyaabaha tayada hooseeya. Qof kasta oo samaynaya walxaha muhiimka ah ama isticmaalka farsamooyinka farsamada SEO-ka ah waa inuu ku dhacaa si dhakhso ah ama ka dib. Google marwalba waxay eegaysaa bogagga internetka ee leh tayo sare iyo macluumaad wanagsan. Shirkadu waxay leedahay labo injineer oo ka shaqeeya kooxdeeda ka shaqeyneysa ka hortagga erayada muhiimka ah waxayna si dhakhso ah u ciqaabi doonaan goobaha ku lug leh khiyaamadan.
Mid ka mid ah khataraha aasaasiga ah waa Google in uu hoos u dhigo boggaaga boggaaga: Waxaa jira fursado ah in laga saaro ama lagu ciqaabo natiijooyinka raadinta raadinta. Taa bedelkeeda, waa in aad isku daydaa inaad ilaaliso tayada bogaggaaga internetka oo aad ka shaqeyso erayada muhiimka ah marka loo baahdo.
Dhibaato kale ayaa ah in walxaha muhiimka ah ee la naqdiyeyn doono inta badan macaamiishaada iyo martidaada. Waa inaadan illoobin in ay rabaan in ay akhriyaan waxqabadyo firfircoon, wargelin iyo waxtar leh. Haddii aad soo buuxisay ereyo badan oo ereyada muhiimka ah oo aad ku dhejisey tayada, kama soo bixi kartid filashooyinkooda mana martiqaadi kartid martidaada macaamiisha faraxsan.
Kala xulashada Ereyada muhiimka ah ee ka shaqeeya:
Waa run in ereyada muhiimka ah ay muhiim tahay, laakiin waa inaad fahamtaa farqiga u dhexeeya isticmaalka erayada muhiimka ah iyo walxaha muhiimka ah. Aan halkan iigu sheego inay yihiin labo habab oo SEO ah. Google wuxuu hoos udhigaa walxaha muhiimka ah laakiin wuxuu jecel yahay maqaallada ku jira nambarada saxda ah ee macquulka ah.
Sidaa darteed, waa inaad ka fekertaa ereyada muhiimka ah ee si caqligal ah adigana ha u isticmaalin erayo iyo ereyo badan oo ku jira isla cutubka. Waa in aanad marnaba xooga saarin bots SEO in calaamadiso goobaha iyo u fakaraan inay tahay mid lagu kalsoonaan karo. Google wuxuu leeyahay sharciyadiisa iyo qawaaniintiisa, iyo webmaster kasta waa inuu raacaa haddii isaga ama iyada ay rabaan inay gaaraan natiijooyinka la rabay.
Sidee loo xisaabiyaa ereyada muhiimka ah?
Marka laga reebo ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah, waa inaadan marnaba isticmaalin jumladaha khalkhal galinaya socodka content. Muuqaalada kala duwan ee bloggers iyo webmaster waxay diirada saaraan erayada ereyada iyo odhaahyada, laakiin waa inaad keydka calaamadaha muhiimka ah ka dhigtaa laba ilaa afar boqolkiiba oo keliya. Waxaad isticmaali kartaa xogta Google-ka ah ee isku-dhafan si aad u sii wado taariikhda ku saabsan waxa Google uu jecelyahay iyo sida kor loogu qaado khadkaaga internetka.